4 Atụmatụ iji mepụta Usoro Marketingzụ ahịa vidiyo Na-aga nke Ọma maka Azụmaahịa Gị | Martech Zone
Ọ bụghị ihe nzuzo na ojiji nke vidiyo na ahia ọdịnaya na-arị elu. N'ime afọ ole na ole gara aga, vidiyo ịntanetị egosiwo na ọ bụ ụdị ọdịnaya kachasị emetụta ma dị egwu maka ndị ọrụ. Mgbasa mgbasa ozi aghọwo otu n'ime nyiwe kachasị dị irè maka ịzụ ahịa vidiyo, nke ahụ abụghị eziokwu. Anyị nwere ụfọdụ ndụmọdụ dị mkpa maka gị otu esi emepụta vidiyo dị mma nke na-adọrọ uche ndị na-ege gị ntị ka ha wee mee ihe.
1. Mepụta vidiyo iji nyefee ndu
N'adịghị ka gị, ndị ahịa gị nwere ike anaghị eche maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ogologo ụbọchị niile dị ka gị. Kama, ha nwere mmasi na ebumnobi ha. Iji mee ka ndị ahịa nwere ike ịkwụsị ma leba anya, ị ga-eme ka ọdịnaya gị metụta ha.
Ndị mmadụ na-ahụ n'anya ma na-echeta akụkọ. Akụkọ dị mma nwere esemokwu doro anya na mkpebi na-enye afọ ojuju. Ọ bụrụ n’ịgbasa azụmahịa gị site na iji akụkọ nwere nsogbu ziri ezi yana azịza dị irè, ndị mmadụ nwere ike ige ntị na ozi gị dum ma cheta ihe ị ga-enye.
2. Nweta vidiyo gị ka achọpụtara ma bulie nke ọma na Youtube
Ibudata vidiyo ezughị. Iji nwetakwuo echiche ma mepụta nsonaazụ, ịkwesịrị ịgwa Youtube ihe vidiyo gị gbasara yana ndị na-ege ntị ga-enwe mmasị na ya. Ihe nlere vidiyo na-enye gị ohere iji nweta vidiyo gị n'usoro yana ọdịnaya ndị mmadụ hụrụ. Yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu echiche, ndị debanyere aha na okporo ụzọ sitere na Youtube, soro ndụmọdụ ndị a:
Chọpụta isi okwu gị ma hụ na ị buliri ọdịnaya Youtube gị maka ha.
Dee ederede dị mkpirikpi, na-adọrọ mmasị, ma na-akpali akpali nke na-akọwa nkenke ihe vidiyo gị gbasara. Isiokwu kwesịrị ịgụnye isiokwu gị ezubere iche.
Dee nkọwa zuru ezu nke na-agwa ndị na-ekiri gị ihe mere vidiyo gị ji dị mkpa ile ma hụ na ọ gụnyere isiokwu gị. Rịba ama na ọ bụ naanị ahịrị 3 mbụ na-ahụ anya na Youtube na-enweghị ịpị G MKWUO njikọ, ya mere njikọ ọ bụla na ịkpọ oku ga-etinye n'elu.
Tinye mkpado dị mkpa na nhazi. Nke a na-enyere Youtube aka igosipụta vidiyo gị dị ka vidiyo a tụrụ aro mgbe ndị ọrụ na-ekiri vidiyo yiri ya.
Gbakwunye thumbnail omenala maka vidiyo nke dabara na akara gị ka ndị na-ege gị ntị nwere ike ịchọpụta vidiyo gị n'ụzọ dị mfe.
Tinye ndepụta okwu na nkpuchi mechiri emechi. Nke a ga - akwalite Youtube SEO gị ma ọ ga - adịrị ndị na - ekiri ya mfe ilele anya na gburugburu mkpọtụ ma ọ bụ na-enweghị ụda.
Gbaa nzaghachi, nkọwa, na ajụjụ. Nke a ga - enye ikike ọwa gị ma nyere gị aka wulite obodo.
Tinye vidiyo nke onyonyo nke Youtube na njedebe nke vidiyo. Ndị a ga - enyere gị aka ịkwalite ọdịnaya gị, ọwa, yana ịkwọ ụgbọala gaa na weebụsaịtị gị.
3. Nwee mmata ma mee njem okporo ụzọ
Ezubere vidiyo Teasers iji dọta uche ndị na-ekiri ma kpalie ịchọ ịmata ihe. Ndị nwere ihe ịga nke ọma na-atọ ụtọ ihe na-abịanụ ka ndị mmadụ nwee ike ịnụkwu ozi. N'oge a, Social Media na-enye ụzọ dị mfe ma dịkwa mfe iji nweta ọtụtụ ozi n'ebe ahụ gbasara ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị n'oge dị mkpirikpi. Ringkekọrịta teasers vidiyo bụ ụzọ dị mma iji dọta uche ndị na-ege gị ntị wee kpọọ ha ka ha gaa na weebụsaịtị gị maka vidiyo na ozi miri emi. Nke a ga - enyere gị aka ịkụzi atụmanya gị, mepụta ikike tozuru etozu ma bulie ọnụọgụ mmechi gị.
4. Tụọ na Njikwa
Ugbu a ị malitere vidiyo gị, ịkwesịrị ịlele arụmọrụ nke ọdịnaya vidiyo gị n'ụzọ ziri ezi. Ma ọ bụ ezie na echiche vidio bụ ihe ọtụtụ ndị ahịa nwere ike ile anya na mbụ, ọ bụghị mgbe niile bụ ụzọ kachasị mma iji chọpụta etu vidiyo gị si eme nke ọma.
Ihe niile gbasara ebum n’uche gị!
Isetịpụ ihe mgbaru ọsọ vidio kwesịrị ịbụ ihe mbụ ị ga-eme. Nke a ga - enye gị nduzi achọrọ ka ị gbado anya naanị na data ịchọrọ ma zere igbu oge na ozi na-adịghị mkpa. Kedu ihe ị na-atụ anya inweta? Kedu ihe bụ ebumnuche ahịa gị maka mkpọsa a? Wantchọrọ ịmalite ịmara, nyere aka ịme mkpebi, ma ọ bụ kpalie ime ihe?
Dabere na nke ahụ, ị ​​nwere ike ịmata nke metrik ga-emetụta ọ bụla ebumnobi.
Ugbu a, ka anyị hụ usoro metrik ị nwere ike iji maka gị ebumnuche:
Total egwuri egwu - Nke a bụ usoro kachasị mfe ma kachasị aghụghọ. Onu ogugu na egosi gi onu ogugu ndi mmadu puru igwu egwu na vidiyo gi n’agbanyeghi oge ha lere vidiyo. Ọ bụ ezie na usoro a dị mma iji tụọ iru, ị nweghị ike ịchọpụta etu vidiyo gị si dị irè.
Kpọọ ọnụego - Play Rate bụ pasent nke ndị ọbịa peeji nke pịrị bọtịnụ egwu wee malite ile vidiyo gị. A na-agbakọ ọnụego egwu site na iji ọnụ ọgụgụ zuru oke nke egwuregwu wee kewaa ya site na ọnụ ọgụgụ nke vidiyo vidiyo. Nke a ga - enyere gị aka ikpebi ma etinyere vidiyo ahụ n’ebe kwesịrị ekwesị na etu isi ntaneti vidiyo gị si maa mma. Ọ bụrụ na ị na-enweta ọnụego egwuregwu dị ala, ị nwere ike ịchọrọ ịtụle vidiyo gị na ebe a ma ama karị, na-eme ka vidiyo ahụ agbakwunyere buru ibu, yana inwe thumbnail na-adọrọ mmasị.
Ọnụ ọnụego - Njikọ aka na-egosi gị ole ndị na-ekiri vidiyo gị na-ele, ma gosipụta ya dị ka pasent. Nke a bụ isi ihe ngosi na-agwa gị otu vidiyo gị si dị mkpa ma na-atọ ụtọ nye ndị na-ekiri gị ma nwee ike inyere gị aka ịchọpụta oge ndị na-ekiri gị ga-amalite ịkwụsị mmasị na akụkụ ndị a na-egwu. Nke a ga - enyere gị aka itinye bọtịnụ oku na - arụ ọrụ na ihe ndị ọzọ na - emekọrịta mmekọrịta n'ụzọ dị oke mkpa n'oge vidiyo ahụ.
Ịkekọrịta Ahịa - Mmekọrịta mmekọrịta na-egosi otu esi ekesara ọdịnaya vidiyo gị n'ofe ọwa ntanetị. Kekọrịta ọdịnaya na-eduga n'inwekwu vidiyo, na-eru ndị ọhụrụ ntị, ma nwee ike inyere gị aka ịchọpụta obi ụtọ ndị na-ege gị ntị nwere gbasara ọdịnaya na akara gị.
Ọnụego ntụgharị - Ntughari bụ ọnụọgụ nke omume emere n'oge ma ọ bụ mgbe ikiri vidiyo. Ndị a nwere ike ịbụ CTA na nkọwa akọwapụtara, ndu ndị emepụtara, na ndị ọzọ. Usoro a bụ ntakịrị aghụghọ iji soro, ma eleghị anya ị ga-achọ onye ọkpụkpọ vidiyo raara onwe ya nye dị ka Wistia, Vidyard ma ọ bụ Sprout Video maka nkọwa zuru ezu nke ihe omume. Ntughari ọnụego bụ ọnụọgụ dị mkpa eji enyere iji tụọ ROI nke vidiyo gị na-eweta.
Chọrọ ịmatakwu banyere otu vidiyo nwere ike isi nyere aka jupụta mbọ ị na - agba?
Kpọtụrụ anyị ugbu a maka Ndụmọdụ Azụmaahịa vidiyo n'efu.
biko gaa na anyị Youtube Channel n'ihi na ihe Video Atụmatụ na-n'aka na mbo mbuli gị ahịa mkpọsa.
Tags: ụlọ 4 mediaime4mediavideo mmatantughari vidiyovideo akavideo isiokwuahịa vidiyousoro mgbasa ozi vidiyovidiyo vidiyonjikarịcha vidiyovideo play ọnụegoihe nkiri vidiovideo nkekọrịtaatụmatụ youtube
Nọvemba 3, 2020 na 3:34 nke ụtụtụ
Mee 14, 2021 na 7: 24 AM
Daalụ maka ịkekọrịta ndụmọdụ. M ji ihe a eme ka ndị ọzọ ghọta.